WARBIXIN: Gacmo gashiga sixirka ah ee uu sito Goolhaye Donnarumma ee xulka Talyaaniga u diray Semi-finalka EURO 2020 – Gool FM
WARBIXIN: Gacmo gashiga sixirka ah ee uu sito Goolhaye Donnarumma ee xulka Talyaaniga u diray Semi-finalka EURO 2020
Haaruun July 6, 2021
(Yurub) 06 Luulyo 2021. Warbixintaan waxa ay ku saabsan tahay Gloves-ka ama gacma gashiga cajiibka ah ee uu aaminay goolhayaha xulka qaranka Talyaaniga ee Gianluigi Donnarumma, kuwaas oo ka duwan Goloofisyada ay xirtaan goolhayayeyaasha kale ee kubadda cagta, guulo badanna isagoo xiran goloofisyadaasi uu u horseeday xulka Gli Azzurri.
Maxay tahay sixirka ku duugan Goloofisyadan?, warbixintan ayaad ku ogaan doontaan, sidoo kale waxaan ku soo qaadi doonnaa Goolhayeyaasha kale ee ku fashilmay Gacmo gashigaan oo sidii ay rabeen ugu shaqeyn kari waayey.
Xulka qaranka Talyaaniga ayaa ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigay tartanka Euro 2020-ka kaasoo hadda soo gaaray afar dhammaadka, iyadoo xulka Talyaaniga koobka Qarammada Yurub ee 2020 laga dhaliyay laba gool oo qura, waxaana abaalkeeda leh goolhayaha xulka Talyaaniga ee Gianluigi Donnarumma, maadaama tan iyo markii tartankani billowday labo gool oo qura ay shabaqiisa taabteen.
Kulankii Jimcihii dhex maray Talyaaniga iyo Belgium ee siddeed dhammaadka koobka Qarammada Yurub kaas oo 2-1 guushii ku raacday Talyaaniga uguna soo gudbay afar dhammaadka ama Semi-final-ka, waxaa ay diiraddu ay saarneyd goolhaye Donnarumma oo ahaa mid si fiican u ilaalinayay shabaqa xulka Talyaaniga ciyaarihii la soo dhaafay ee Qarammada Yurub, waxaana sidii caadadu ahayd uu xirnaa Donnarumma Goloofis ama gacmo gashi indhaha soo jiidanaya.
22-sano jirkaan ayaa Goloofiskan cajiibka ah ee uu xirto waxaa saartay shirkadda Adidas, waxaana warbixin uu ka diyaariyay Wargeyska ‘Marca’ ee ka soo baxa Spain uu goloofisykan ku tilmaamay kuwo sixir ah, maadaama ay nasiib u noqdeen Talyaaniga oo soo gaaray Nus dhammaadka Koobka qarammada Yurub, intii ay ciyaaraha socdeenna shabaqooda laga dhaliyay 2 gool oo kaliya.
Goloofisyadan ayaa waxaa lagu farsameeyay teknoolojiga (Pro Hybird), qiimo ahaan ma lacag badna oo waxay joogaan 120 Euro, laakiin waxaa lagu dhejiyay 288 cirbadood, kuwaas oo awood u siinaya goolhayaha in uu kubadda si fiican u qabto, isla markaana uu si heer sare ah isaga difaaco darbadaha kulul ee lagu soo tuuro, isagoo kaashanaya Goloofisyadan jilicsan ee ay gacantu ku raaxeysnayso dhinicii la doonana si dhib yaraan ah loogu jiheyn karo ama loogu leexin karo kubadda.
Dhanka kale Goolhaye Donnarumma ma’ahan goolhayihii ugu horreeyay ee xirta Goloofiskan indha-qabadka ah, hase yeeshee waxaa haatan ka hor xirtay goolhayaha Spanish-ka ah ee kooxda Manchester United, David De Gea iyo Aaron Ramsdal oo ah goolhaye da’yar oo Ingiriis ah oo u ciyaara kooxda Sheffield United, laakiin nasiib-darro sixirka gacamo gashiyadaan uma shaqeyn labadaan goolhaye.
Talaadada caawa oo uu Talyaanigu kulan adag oo nus dhammaadka Koobka Qarammada Yurub ah kaga hor tagi doono xulka Spain ayaa shaki la’aan uu goolhaye Gianluigi Donnarumma soo xiran doonaa goloofisyadan sixirka ah ee loo bogay, waana arrin ay ka siman yihiin ciyaartoyda kubadda cagtu inaysan iska dhigin dharka ama Kabaha ay mar iyagoo xiran ay guul ku gaaraan.
Dhanka kale Wargeyska ‘Der Spiegel’ ee ka soo baxa Jarmalka ayaa warbixin uu dhowaan ka qoray goolhaye Gianluigi Donnarumma waxa uu cinwaan uga dhigay ‘Goolhayaha hibada cajiibka ah leh ee qalbi jab ku rida kuwa ka soo horjeeda’.
Waxaa kale oo isla warbixintani uu Wargeysku ku tilmaamay in kooxda AC Milan ee Talyaaniga oo haatan qorsheyneysa in ay iska iibiso goolhaye Donnarumma ay si weyn u tebi doonto goolhayahan, haddii ay iibisana uu go’aankaasi noqon doono mid aan si dhab ah looga fiirsan.
Intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixintii ku saabsanayd Goloofisyada sixirka ah ee uu xirto Goolhayaha xulka qaranka Talyaaniga ee Gianluigi Donnarumma.
Alexandre Lacazette oo hoggaaminaya saddex xiddig oo ay Kooxda Arsenal diyaar u tahay inay iska dirto Suuqaan kala iibsiga
Kooxda Manchester United oo rajaynaysa inay 75 milyan oo gini ku dhammaystirto saxiixyada labo xiddig maalmaha soo aaddan